Ukuphupha ihagu yeginea Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Iihagu zaseGuinea zezinye zezilwanyana zasekhaya ezaziwa kakhulu kweli lizwe. Iimpuku zeChubby zichaze kakhulu ubume bezentlalo kwaye zikhetha ukuhlala ngababini okanye kwiqela lendoda, abanye abantu ababhinqileyo kunye nenzala yabo.
Abasoloko benxibelelana ngokusondeleyo nabantu kwaye bahlala benentloni kwaye, ngokuchaseneyo nenkolelo edumileyo, bahlala bengathandi ukuphathwa okanye ukukhohliswa. Ewe kukho ukungafani apha, ezinye izilwanyana zithembela kakhulu. Zifumaneka endle kwiindawo ezininzi eMzantsi Melika. Kukwimenyu yabemi balapho.
Ukuba ubona ihagu yeginea ephupheni, inokuba ikukhumbuza ngesilwanyana esineempawu ezintle onokuthi usikhathalele kunye nesilwanyana. Ukutolikwa kwamaphupha, olu phawu lwephupha lubaluleke ngokukodwa njengoko lubonisa iimvakalelo kunye nezimo zeli phupha.
1 Uphawu lwephupha «ihagu yeginea» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ihagu yeginea» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ihagu yeginea» - ukutolika ngokomoya
Uphawu lwephupha «ihagu yeginea» - ukutolikwa ngokubanzi
Ingulube yeguinea ibonakalisa uxanduva nokutolika amaphupha. Ingqondo yoluntu. Iimpawu ezinje ngokunyaniseka, umanyano kunye nokunyaniseka kubaluleke kakhulu ekuphupheni. Ukongeza, uphawu lwephupha lukwanokubonisa umnqweno wokuthatha uxanduva lomnye umntu, ngakumbi umntu ongakwaziyo ukuzikhathalela ngenxa yokunqongophala kwengqondo.
Kanye njengokuba ihagu yeginea ibonwa intle ephupheni, nayo ikwacinga ukungancedi nganto kumntu oneemfuno zakhe angathanda ukumnyamekela. Ke ngoko, uphawu lwephupha ekuchazeni iphupha nako kunokuba sisilumkiso ngokuchasene I-Verniedlichung kwaye uyathandeka.
Ngokubanzi, uphawu lwephupha "ihagu yeginea" lithetha ukuzala kunye nolonwabo eluthandweni. Ephupheni, ukubonakala kwakhe kubonisa zonke iintlobo zeminyhadala yovuyo. Ukubona ihagu yeginea kuthetha ukutolika amaphupha umntu anokuthembela kubomi obonwabileyo kunye neenkampani eziphumeleleyo.
Uphawu lwephupha «ihagu yeginea» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, ihagu ye-Guinea luphawu lwephupha oludlala indima ekutolikeni amaphupha, ngakumbi ngenxa yokuncipha rhoqo.
Ukuba iphupha elo linxulumene nentonga ephupheni kuyo, inengxaki yokuba umntu uhlala eyiphatha njengomntwana, hayi kakhulu. ithathwa ngokungathí sina. Oku kukwenza uzive ungaxabisekanga kubuntu bakho. Kungenzeka ukuba abantu abakungqongileyo bakushiye okufunekayo umgama ilahlekile, edla ngokucingwa njengomntu omdala. Uphawu lwephupha "i-guinea pig" luphawu oluvela kwi-subconscious umntu kufuneka azikhusele ngokuchasene nalo.
Enye into ekuchazeni amaphupha. Unciphiso vyeengxaki zesini, iimvakalelo kunye neemfuno, ezinokubonakaliswa kwisimboli yephupha "ihagu yeginea". Izinto ezibaluleke kakhulu ekulaleni zinamava okungaqondi. Nangona kunjalo, eli phupha lilumkisa umphuphi ukuba angabenzi abanye abantu ngeminqweno yabo kunye nobunzima bangabi bancinci kubo.
Ukuziphatha okuchaziweyo kweengulube ze-Guinea kukwabonisa ukutolikwa kwamaphupha. izakhono zentlalo yokuphupha. Isilwanyana sephupha sibonisa indlela lo mntu kuthethwa ngaye aziphatha ngayo ekuhlaleni naxa esebenzisana nabanye abantu.
Isimboli yephupha ifanekisela ukuthanda komntu ukuba ancede uluntu, kodwa amkele ukhuseleko. Iphupha elo kufuneka licacise indlela ozikhusela ngayo iinqobo zokuthenjwa kunye nobuhlobo. Kwiphupha loomama abancinci, uphawu lwephupha "iguinea pig" ihlala ibonisa ukungabathembi abantu ekufuneka babeke usana lwabo kubo.
Uphawu lwephupha «ihagu yeginea» - ukutolika ngokomoya
Ihagu yehagu idibanisa njengomntu ophupha ngaye emhlabeni Umama Umhlaba. Kwindiza yomoya, uphawu lwephupha luthatha iphupha lisiya ezinzulwini, apho linokufumana khona ubuncwane obungenakucingelwa obuvumela umphefumlo ukhanye.
Kwinkcazo yamaphupha, i-rodent yazisa ngokweemvakalelo nangokomoya cura kunye nengxelo.